တစ်ဦးစိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်စိန်ခေါ်မှုကျောင်းကို၏အစ. သငျသညျကြောငျးမှာသင့်ကလေးကကူညီဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်. သူတို့ကျောင်း၌သင်တို့၏သားသမီးတို့ကိုထောကျပံ့ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူသူတို့ကိုအောင်မြင်ဖို့ကူညီ.
အဆိုပါကျောင်းတွင်ကလေးများအချိန်အများစုကိုဖြုန်းရာအရပ်ဖြစ်ပါသည်. သူတို့ကကျောင်းအတွက်ဘာသာစကားနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကိုလေ့လာသင်ယူ. မိဘများကိုကူညီရန်အရေးကြီးပါသည်ဒါဟာဖြစ်ပါသည်. သငျသညျကောင်းစွာအင်္ဂလိပ်မသိစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်သင့်ကလေးကကူညီနိုင်သည့်အတွက်နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်. တဖန်သင်တို့သူတို့ကိုယ်သူတို့ကိုကူညီဖို့ဘယ်လိုသူတို့ကိုဖျောပွနိုငျ! ဒီနေရာတွင်ကျောင်းမှာသင့်ကလေးကိုကူညီလိမ့်မည်ဟုအချို့အတွေးအခေါ်များဖြစ်ကြောင်း.
ကျောင်းထဲတွင်သူငယ်ကအမြဲကသူ့ခံစားချက်တွေကိုအကြောင်းကိုမပြောပါလိမ့်မယ်. သူတို့ကအတွင်းအခက်အခဲနှင့်ရင်ဆိုင်ရပေမည်, ဒါပေမဲ့သူတို့ Aharok သက်ဆိုင်ရာခံရဖို့မလိုချင်ပေမည်. သူတို့ခံစားရမကြာခဏဘယ်လိုသူတို့ကိုမေးကြည့်ပါ. မေတ္တာရပ်ခံလျှင်သူတို့ကသူတို့ရဲ့ပြဿနာအကြောင်းကိုသင်ပြောပြဖို့ပိုများပါတယ်.
အသစ်တခုကျောင်းမှာဖွင့်ဖို့ခဲယဉ်း. ကျောင်းကပဌမနေ့ရက်မတိုင်မီသင့်ကလေးနှင့်အတူကျောင်းသို့သွားရောက်. ဒါကပထမဦးဆုံးနေ့၌ရောထွေးသို့မဟုတ်လူတွေလူတွေဆုံးရှုံးဖို့မသူတို့ကိုကူညီပေးသည်.
ကလေးအများစုဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအားကစားအသင်းများကစား. အခြားသူများကကလပ် join သို့မဟုတ်ကျောင်းပြီးနောက်ဂီတကစားခြင်း. သင့်ကလေးကိုမည်သည့်လှုပ်ရှားမှုများအတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်သင်သိ. အားကစားသူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်မိတ်ဆွေဖွဲ့ပါကူညီပေးပါမည်.
လေ့လာမှုရဲ့ start မတိုင်မီသင့်ကလေးလိုအပ်ပါတယ်စာအုပ်များနှင့်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်ကြိုးစားပါ. သငျသညျကျောင်းကထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများများ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုမတတ်နိုင်လျှင်, သင့်ကလေး၏ဆရာစကားပြော. သငျသညျကျောင်းကထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများအတွက်အကူအညီရနိုင်မည့်ငါသည်သင်တို့ကိုပြောပြလိမ့်မယ်.
အမေရိကန်ကျောင်းများသားသမီးများ၏စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အတူသက်ဆိုင်ရာသူတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးနေကြတယ်. ဒါ့အပြင်ဆရာနှင့်အမေရိကန်များအလွန်တိုက်ရိုက်များမှာ. သင်သည်မည်သည့်အမူအကျင့်ပြဿနာများအကြောင်းကိုပြောပြရန်လိုပေမည်. ကျောင်းဟာအလွန်သေးငယ်တဲ့ကလေးအဘို့, သူတို့အလောင်းတွေနှင့်အတူကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်. သင်ပြောပြစေခြင်းငှါ. ဥပမာအားဖြင့်, တစ်ဦး Pre-ကျောင်းကဆရာမသင့်ကလေးအစာအိမ်ပြဿနာများကိုခံစားနေရပြီးတစ်ခုသို့မဟုတ်အရေပြားအဖုအနေဖြင့်ခံစားနေရကြောင်းသင်ပြောပြစေခြင်းငှါ. ဤသူသည်သင်တို့မသက်မသာစေသည်လျှင်, ဆရာမသင့်ကလေးကိုကူညီဖို့ကြိုးစားနေကြောင်းသတိရ. သင့်အနေဖြင့်ပြဿနာများအကြောင်းကိုရိုးရိုးသားသားပြောနေတာဖြင့်သင့်ကလေး၏ဆရာကိုထောကျပံ့ခြင်းနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်.
သူတို့သားဖြစ်ကြ၏သည့်အခါကလေးများတစ်နေ့တာစောင့်ရှောက်မှုသွားစတင်နိုင်ပါသည်. တချို့ကကလေးတွေကိုသွားနိုင်ပါတယ် (နေ့ဂရုစိုကျတယျ) နှစ်လဟောင်းသတင်းပို့သူကားအဘယ်သူ. အများအားဖြင့်သူတို့၏အသက်မှာကလေး4သို့မဟုတ်5သူတို့သူငယ်တန်း start သည့်အခါနှစ်ပေါင်း. သူတို့အများဆုံးအကူအညီလိုတဲ့အခါဒီဖြစ်ပါသည်.
ပျိုးခင်းများနှင့်နေ့ရက်ကိုစောင့်ရှောက်မှုအတွက်ဆရာ, ဆရာမအဝတ်အစားတွေဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်သူတို့ကမတတ်နိုင်သည့်အခါသူတို့ကိုကူညီပေးဖို့ကလေးအတော်များများသင်ပေးဖို့. အဝတ်ကွာရှင်းဖို့လွယ်ကူတဲ့အခါ, သင်ကလေးနှင့်ဆရာကိုကူညီနှစ်ဦးစလုံး.
သင့်ကလေးကိုတစ်မောအိပ်ကြာသို့မဟုတ်ကျောင်းအတွက်တိတ်ဆိတ်တဲ့အချိန်ရှိတယ်လျှင်, ငါအိမ်မှာလုပ်. သူတို့ကလွယ်ကူသူတို့ကိုကျောင်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အတိုင်းလိုက်နာရန်အဘို့အစေမည်.
စာဖတ်ခြင်းသင်၏သားသမီးငယ်ရွယ်အခါစတင်ရန်ကောင်းတစ်ဦးအလေ့အထတစ်ခုဖြစ်သည်. စာဖတ်ခြင်းကျောင်းမှာကောင်းကောင်းသင့်ကလေးကိုကူညီပေးသည်. သင့်ကလေးကိုမှအကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်ပါတ်ကိုဖတ်ရှုဖို့ကြိုးစားပါနှင့်အိပ်ရာဝင်ချိန်မှာ. သငျသညျကောင်းစွာအင်္ဂလိပ်မသိလျှင်, ရုပ်ပြစာအုပ်တွေအဘို့ကိုကြည့်ခြင်းနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုဖြစ်ပျက်နေသည်သင်သည်အဘယ်သို့ပြောပြရန်သင့်ကလေးမေးပါ. သင်တို့သည်လည်းအတူတူအင်္ဂလိပ်အက္ခရာများကိုသင်ယူစတင်နိုင်ပါသည်.
သင့်ကလေးငါးခု၏အသက်အရွယ်မှာပထမဦးဆုံးတန်းစတင်မည်. ဒါဟာမူလတန်းကျောင်းနှင့်အလယ်တန်းအဆင့်ပါဝင်သည် 1 သို့ 8.
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိကလေးများနေ့တိုင်းအိမ်စာအမျိုးအစားကိုရရှိသွားတဲ့. သငျသညျညစဉ်ညတိုင်းအနည်းဆုံးအရာအားလုံးလုပ်ဖို့သူတို့ကိုအားပေးရပါမည်. သင်အလုပ်လုပ်နေသောအရာကိုနားလည်မထားဘူးဆိုရင်, ဒါကြောင့်သင်ပြောပြရန်သူ့ကိုမေး. အခါသင်တတ်နိုင်သမျှသူတို့ကိုကူညီပေးဖို့ကြိုးစားပါ.
ဘယ်လိုသင့်ကလေး၏စွမ်းဆောင်မှုထွက်ရှာတွေ့မှမိဘများနှင့်ဆရာ, ဆရာမများ၏အစည်းအဝေးများတက်ရောက်ရန်သေချာပါစေ. သင်တစ်ဦးစကားပြန်လိုအပ်ပါက, စောစောဆရာမမေးရန်သင့်ကလေးကိုပြောပြ. နှောက်ယှက်အံ့သောငှါဘာမှ ပတ်သက်. ဆရာပြောပြရန်မစိုးရိမ်.
သူတို့ကျွမ်းကျင်စွာစာဖတ်သူများများမှာသည်အထိနေ့စဉ်နေ့တိုင်းသင့်ရဲ့ကလေးတွေနဲ့အတူစာအုပ်တွေကိုဖတ်ပါ. သငျသညျအင်္ဂလိပ်မသိလျှင်, သင်အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ချက်၌သင်တို့ကိုမှဖတ်ရှုဖို့သူငယ်ကိုမေးနိုငျ. ကလေးအတော်များများဗီဒီယိုဂိမ်းကစားသို့မဟုတ်ဤအသက်အရွယ်အတွက်လူမှုရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင်တီဗီသို့မဟုတ်ရှယ်ယာစောင့်ကြည့်ဖို့လိုခငျြ. သူတို့ရဲ့အချိန်ကိုရွေးပါနှင့်စာဖတ်ခြင်း၏တာဝန်ကိုပြသရန်သေချာစေပါ.
high School တွင်
သင့်ကလေးအားကစားသို့မဟုတ်လှုပ်ရှားမှုများတွင် အကယ်. ဖြစ်နိုင်လျှင်, အဲဒါကိုသွားပါ. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌မိဘများပေါ်ထွန်းနေဖြင့်ကလေးများကို support. ဒါဟာအစသင်သည်သင်၏အသိုင်းအဝိုင်းများတွင်ပိုမိုလူတွေဖြည့်ဆည်းဖို့ကူညီပေးနိုင်ပါသည်.
ကျောင်းသားများတက္ကသိုလ်မှစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၏အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌စတင်သောအခါအအထက်တန်းကျောင်းဖြစ်ပါသည်. ၎င်းတို့၏အစီအစဉ်များ၌သင်တို့၏သားသမီးတို့အားပေး. အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့်ကောလိပ်နှင့်အတူကျောင်းကိုထံမှအကူအညီကိုရယူပါ.
ကလေးတစ်ဦးအဖြစ်ကျောင်းရဲ့ start မှာရင်ဆိုင်ရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအကြောင်းကိုအမျိုးသမီးတွေ immigrant ဖို့အမရေိကနျပွညျထောငျစု၏တဦးတည်းပြောတတ်. သင့်ကလေးကကူညီဖို့ဘယ်လိုပေါ်တချို့ကအကြံပေးချက်များ.